Tag: sistemụ njikwa ọdịnaya | Martech Zone
Tag: sistemụ njikwa ọdịnaya
Sunday, Jenụwarị 31, 2021 Sunday, Jenụwarị 31, 2021 Douglas Karr
Otu onye ọrụ ibe m a na-akwanyere ùgwù kpọrọ m na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-arịọ maka ndụmọdụ ka ọ na-agwa otu azụmahịa na-ewu usoro ntanetị ya. Nzukọ ahụ nwere ndị mmepe nwere ọgụgụ isi nke ukwuu ma ha na-eguzogide iji usoro njikwa ọdịnaya (CMS)… kama ịkwọ ụgbọala iji mejuputa ngwọta nke ụlọ ha. Ọ bụ ihe m nụrụ tupu… m Elezie nye ndụmọdụ megide ya. Ndị mmepe na-ekwenyekarị na CMS bụ naanị nchekwa data
Afọ ole na ole gara aga, 100% nke ndị ahịa anyị jiri WordPress dị ka sistemụ njikwa ọdịnaya ha. Naanị afọ abụọ ka e mesịrị na ọnụ ọgụgụ ahụ agbadala ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ. Ebe ọ bụ na m na-etolite na ịmepụta saịtị na WordPress ruo afọ iri ugbu a, m na-elegara CMS ahụ anya n'ihi ihe ole na ole. Why We Use WordPress Incredible Theme dịgasị iche iche na nkwado. Saịtị dị ka Themeforest bụ ọkacha mmasị m n’ebe m nwere ike ịchọta ọtụtụ
Satọde, 3 Juun 2017 Satọde, 10 Juun 2017 John Blue
M na-ajụ n'oge na-adịbeghị anya Gịnị bụ Drupal? dị ka ụzọ ịmebata Drupal. Ajụjụ na-esote n'uche bụ "M Kwesịrị iji Drupal?" Nke a bụ nnukwu ajụjụ. Ọtụtụ oge ị hụrụ teknụzụ na ihe gbasara ya na-akpali gị iche echiche banyere iji ya. N'ihe banyere Drupal ị nwere ike ịnụ na ụfọdụ weebụsaịtị mara mma na-agba ọsọ na sistemụ njikwa ọdịnaya emeghe: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, na New
Wednesday, July 16, 2014 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Enwere oge mgbe ị na-achọghị imefu ọtụtụ puku dollar na saịtị ọhụrụ - naanị ị ga-achọ onye na-etinye ebe maka pọtụfoliyo ịntanetị, akwụkwọ ngwaahịa dị mfe ma ọ bụ naanị iji gosipụta mbido ntanetị gị. Na-enye ihe ngwọta akwadoro ebe ị nwere ike ịmepụta 3 kachasị mma, saịtị mara mma n'okpuru $ 100 kwa afọ. Strikingly bụ ihe online ọrụ na-eme ka ọ nnọọ mfe n'ihi na ị na-ewu a ọmarịcha, mobile
M na a ogologo oge na-akwado nke folks na Cirrus ABS. Ha weputara ugbu a, MarketSnare, ihe ntanetị weebụ pụrụ iche nke na - enyere gị aka ịkọwawanye ọnụnọ ahịa mpaghara gị! Jiri ngwa dijitalụ a iji mepụta, jikwaa ma chọta akara gị na ire ahịa gị site na ntanetị nke weebụsaịtị gị - ha niile na-eji otu etiti. MarketSnare na-enyere nzukọ ọ bụla nwere ọtụtụ ebe ịnwe weebụsaịtị ọ bụla maka mpaghara mpaghara ọ bụla. Enwere ike itinye ihe ngwọta ya naanị
WordPress, Joomla, K2, Drupal, TYPO3, Blogger, Tumblr… ọ dịtụla mkpa ịkwaga site n'otu saịtị gaa na nke ọzọ? Anyị nwere na ọ na-abụkarị mmekpa ahụ ma na-achọ ọtụtụ mbọ aka. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ọbụlagodi mgbe ịmechara ọdịnaya ahụ, ọ naghị elebara ndị ọrụ anya, otu na mkpado ụtụ isi, slugs URL, nkọwa ma ọ bụ onyonyo. Na nkenke, ọ na-abụ nnukwu ọrụ always ruo ugbu a. Alex Griffis, CTO nke MaxTradeIn